I-Creeping Phlox, i-Phlox Elimazayo: Kulula Ukukhulisa Izitshalo Ezingapheli - Izimbali
I-Creeping Phlox, i-Phlox Elimazayo: Kulula Ukukhulisa Izitshalo Ezingapheli
Ukubuka konke kwe-Phlox
Q: Ngabe kufanele ngibulale ikhanda izimbali?
Q: Amasentimitha amabili aphezulu we-phlox yami ahlafunwa! Usizo?
Ngama-shades amhlophe, abomvana, abomvu, ansomi futhi aluhlaza okwesibhakabhaka, i-phlox isitshalo sokuhlobisa esithandwa ngendlela emangalisayo. Noma ngabe kukhasa i-phlox esakazeka ukuze ibe yi- ikhava yomhlabathi enhle , noma isitshalo esiklabalazayo se-phlox esivandeni, lezi zimbali ezintekenteke ziwumbono obukekayo.
Igama elithi 'phlox' lisuselwa egameni lesiGreki elisho 'ilangabi', okungenzeka likhomba eminye yemibala ebomvu yalesi sitshalo. Kodwa-ke, iningi lama-phloxes akhula endle kulo lonke elaseNyakatho Melika ajwayele ukubheka imibala elula.
Ake sihlole okunye kokuhlukahluka kwezinhlobo ze-phlox namuhla, futhi sidlule indlela engcono yokuqinisekisa ukuthi unokwanda kwamabhulogi akhanyayo unyaka wonke!
Imikhiqizo Emihle Yokulwa Nezinambuzane / Izifo Ze-Phlox:
I-Safeer Brand Yard & Spray Yengadi
Amagama ajwayelekile I-Phlox, ezinwabuzelayo phlox, moss phlox, mountain phlox, moss pink, garden phlox, phlox perennial, summer phlox, fall phlox, tall phlox phlox, Drummond's phlox, phlox annual, thickleaf phlox, woodland phlox, wild blue phlox, wild sweet william, i-phlox encane, isakaza i-phlox, i-phlox esenyakatho
Igama Lesayensi Phlox subulata, Phlox paniculata, Phlox drummondii, Phlox carolina, Phlox divaricata, Phlox condensata, Phlox diffusa, Phlox stolonifera, Phlox adsurgens, nakwezinye izinhlobo ezingaphezu kuka-50
Umsuka INyakatho Melika, ikakhulukazi e-United States kodwa nasezingxenyeni ezithile zeCanada
Ukuphakama Kuya ngokuhlukahluka, noma yikuphi ukusuka kokungu-2 ”kuye ngaphezulu kwamamitha ama-5
Khanyisa Ilanga eligcwele, nezinhlobo ezithile zamukela umthunzi oyingxenye
Amanzi Umhlabathi olingene olumanzi, cishe u-1 ”ngeviki
Ithempelesha Ubekezelela iqhwa, likhula kahle ngama-40-85 degrees Fahrenheit
Umswakama Ingabekezelela umswakama kepha ijwayele ukulimala isikhutha
Umhlabathi Inhlabathi ecebile, ekhipha kahle nge-pH ohlangothini lwe-alkaline lokungathathi hlangothi
Umanyolo Umquba, umquba osekhulile, noma ubulembu bamaqabunga kulungile. Ngaphandle kwalokho, umanyolo olinganiselayo okhipha isivuno sembumbulu entwasahlobo.
Ukusakazeka Ngokusikwa komphumela omuhle. Ukuhlukaniswa nembewu nakho kuyasebenza.
Izinambuzane Ngokuya ngomonakalo ovela kwizicabucabu, ama-aphid, nezimbungulu zezitshalo ze-phlox. Kwangathi ama-slugs noma iminenke yasendlini futhi bangathola umonakalo omncane kubo. Iphinde itheleleke ku-powdery isikhutha, indawo yeqabunga, ukugqwala, nezimpande / umqhele / ama-stem rots.
Kunezinhlobo ezingama-67 zezitshalo emndenini wakwaPolemoniaceae, konke okubhekwa njenge-phlox. Ngenkathi ngingenakukumboza konke nge-swoop eyodwa, ake sihlole izinhlobo ezimbalwa ezithandwayo.
indlela yokukhulisa izinwele zakho ngokushesha
Phlox subulata, 'Creeping Phlox', 'Moss Phlox', 'Mountain Phlox', 'Moss Pink'
Ngamacembe athambekele ekubunjweni kwenhliziyo noma anamazinyo amancane emaphethelweni, i-phlox ezinwabuzelayo iyindawo ethandwa kakhulu. Abomdabu ezingxenyeni ezisempumalanga nasenkabeni ye-United States, iPhlox subulata inamaqabunga afana nenaliti ngeziqu ezincanyana. Ngombala, ingahle isuke kuma-rose futhi ifinyelele kuma-lavenders, ama-blues, nabamhlophe futhi.
Enye yezinhlobo zalezi zinhlobo, uhlobo lwe-rose-pink olwaziwa njenge 'McDaniel's Cushion', seluthole i-Award of Garden Merit evela eRoyal Horticultural Society.
Phlox paniculata, 'Garden Phlox', 'Perennial Phlox', 'Summer Phlox', 'Fall Phlox', 'Tall Garden Phlox'
Ukuqubuka kwezimbali ngamathoni abomvana, abomvu, ansomi noma amhlophe kuwuphawu lwePhlox paniculata. Sethiwa ngama-pannicles aso (izimbali eziqhakazile), lesi sitshalo sivame ukukhula njengesihlahlana esincane, noma siqeqeshelwe umkhuba we-bushing. Ivela empumalanga nasenkabeni ye-United States, futhi ingatholakala nasempumalanga yeCanada.
Izinhlobo eziyishumi nambili ezihlukene zePhlox paniculata zithole i-Award of Garden Merit. Sikhule ngokumangalisayo kabanzi njengesitshalo sokuhlobisa, futhi sithandwa umhlaba wonke.
U-Phlox drummondii, 'u-Phlox ka-Drummond', 'u-Phlox Wonyaka'
Umdabu waseTexas, uPhlox drummondii ubuye asakazeke kabanzi eningizimu-mpumalanga ye-United States. Ibizwa ngegama lesazi sezitshalo saseScotland uThomas Drummond. Le phlox isukela kwimibala e-creamy yonke indlela enombala onsomi omnyama kangangokuba icishe ibe mnyama.
Lezi zinhlobo ezithile zivame ukubonwa zitshalwe emigwaqeni emikhulu kuyo yonke iningizimu-mpumalanga ye-United States, kepha zitholakala kabanzi nasezivandeni. Ukuhluka okuthandwayo yizinhlobonhlobo ze- “Twinkle Star” ezihlukahlukane, ezisukela kokuphinki okumpofu kuya kophinki oshisayo ngombala.
UPhlox carolina, ‘Thickleaf Phlox’
Ngama-cultivars amabili nawo athola i-Award of Garden Merit evela kwi-RHS (“Bill Baker” kanye ne “Miss Lingard” cultivars), iPhlox carolina yinto ejwayelekile empumalanga ye-US. Njengoba iqhamuka eCarolinas, lapho ithatha khona igama layo, lolu hlobo luvame ukuqhakaza izimbali ezibomvu, ezibomvana noma ezimhlophe.
Igama elijwayelekile elithi 'thickleaf phlox' lifanelekile, ngoba lokhu kunephethini leqabunga elibanzi kakhulu uma liqhathaniswa nezinye izinhlobo ze-phlox. I-greenery ithambekele kumathoni amnyama, okwenza izimbali zigqame ngokugqamile uma ziqhathaniswa namaqabunga neziqu.
I-woodland phlox, iPhlox divaricata, itholakala emahlathini nasemasimini asengxenyeni esempumalanga ye-United States. Kunezinhlobo ezimbili ezingaphansi kwalezi zinhlobo. I-Subspecies divaricata ayifakwanga ukuphela kwamacembe, lapho ama-subspecies laphamii engakwenzi.
Umlimi “Chattahoochee” wePhlox divaricata spp. I-laphamii izuze umklomelo we-Garden Merit ovela ku-RHS ngezimbali zawo ze-lavender ezinezikhungo ezi-purple-pink ezikhazimulayo. Amanye ama-cultivars athandwayo afaka phakathi i- 'Blue Moon', 'Fuller's White', ne- 'Clouds of Perfume'.
I-Phlox condensata, 'Ubumnyama Phlox'
IPhlox condensata ibiza ikhaya lasentshonalanga ye-United States, ikakhulukazi izingxenye zezintaba zempumalanga yeCalifornia, iColorado neNevada. Njengesembozo somhlabathi le phlox yemifino engapheli icishe ifaneleke, ngoba kuyaqabukela ikhule ifinyelele kunoma yikuphi ukuphakama okuphawulekayo futhi inokuthambekela kokwakha uhlaka olukhasa phansi lwe-phlox mat ebusweni bomhlaba. Kubonakala sengathi ithanda inhlabathi ene-rockier, ekhipha kahle.
UPhlox diffusa, ‘Ukusabalalisa uPhlox’
Le fomu engapheli yokusabalalisa noma yokugaqa i-phlox isatshalaliswa entshonalanga ye-United States naseBritish Columbia. Imvamisa, yakhe iziqinti zezimbali ezinqamula emagqumeni nasemithambekeni yezintaba. Mude kancani kune-phlox emifushane, iPhlox diffusa itholakala kakhulu endle kunasezilungiselweni zensimu, yize ingafakelwa kalula ezingadini.
UPhlox stolonifera, 'Creeping Phlox', 'Moss Phlox'
Akufanele ididaniswe nePhlox subulata, iPhlox stolonifera ingumdabu ezintabeni zase-Appalachian nasezindaweni ezizungeze amahlathi. Ingatholakala enyakatho ekude njengeQuebec, Canada, kepha itholakala kakhulu e-United States.
I-Phlox stolonifera ithola igama layo kusuka kuma-stolon, noma abagijimi, abenza kube ukuhlukahluka kwe-phlox ehlukahlukene. Okuphinki, onsomi noma okumhlophe ngombala ogqamile, lokhu kuhluka kutholakala kakhulu endle. Amaqabunga awo ayisiyingi nokuphakama okungu-6-10 make kwenza isitshalo esihle sekhava.
I-Phlox adsurgens, 'iWoodland Phlox', 'iNyakatho Phlox'
Abomdabu base-Oregon nezingxenye zezintaba ezingasogwini lwaseCalifornia, i-Phlox adsurgens ijwayele izimbali ezinombala opinki ezinhlanu ezinokhilimu noma ukumakwa okumhlophe. Abanye bobunjwa be-petal bavame ukukhomba kuzeluleko, kubenze babukeke njengezinkanyezi ezincane ezibomvana. Ezinye zihlala zizungezwe ekugcineni, njengalezo ezibonwe ngenhla.
Lezi zivame kakhulu ezindaweni ezinamahlathi noma ezinamahlathi. Ngenkathi bethola ukuthandwa kancane njengokuhlukahluka kokuhlobisa kokusetshenziswa kwengadi ngenxa yobuhle bombala wabo, basavame kakhulu endaweni yabo yemvelo.
Isitshalo se-phlox silondolozwa kancane ngokumangazayo, kepha kunezinto ezimbalwa ongazenza ukuqinisekisa imiphumela emihle kakhulu.
Izinhlobo eziningi ezinwabuzelayo ze-phlox zifana nelanga eligcwele. Lokhu kufaka phakathi zombili izinhlobo zemingcele efana nePhlox carolina nezinhlobo eziningi zezinkuni. Noma yiziphi izinhlobo zokugunda, njengePhlox paniculata, zikhetha ilanga eligcwele. Uma nje isitshalo sakho se-phlox sithola ukukhanya okungenani kwamahora ayisithupha ngosuku, kufanele ube namandla amahle okukhula.
Ngokuvamile, ama-phlox amaningi akhetha ubuncane bamanzi ayi-1 ngeviki. Kodwa-ke, izindawo ezishisayo zingadinga amanzi amaningi ezitshalweni. Kubalulekile ukuthi uhlale unisela i-phlox, noma ngabe i-phlox ezinwabuzelayo noma izinhlobo ezinqwabelanayo, phansi ezansi kwesitshalo. Eqinisweni, kulula kakhulu ukusebenzisa ukuchelela kwe-drip ezungeze i-phlox njengoba kuzonciphisa ubungozi be-powdery isikhutha noma ezinye izifo zezitshalo.
Umthetho omuhle wesithupha wesitshalo se-phlox ukuthi uma ungazizwa umswakama enhlabathini lapho unamathisela umunwe wakho amasentimitha ambalwa ngaphansi kobuso benhlabathi, kufanele ulunge. Ukwengeza i-mulch ukugcina umswakama womhlabathi kunconywa.
Inhlabathi ecebile ilungele izitshalo ze-phlox. Umhlabathi we-phlox yakho ezinwabuzelayo kufanele ube sohlangothini lwe-alkaline lokungathathi hlangothi (6.5-7.0), ngakho-ke uma inhlabathi yakho ine-asidi, i-lime encane ye-horticultural ingaba ukwengeza okuhle. Kukhethwa izinto eziningi eziphilayo emhlabathini, ngakho-ke qiniseka ukuthi uchibiyela inhlabathi yakho ngomquba osekhulile noma umquba.
Ukudonsa okuhle kuyadingeka, njengoba lezi zitshalo zingathandi ukuba nezinyawo ezimanzi. Kodwa-ke, lezi zitshalo azenzi kahle enhlabathini eshisayo neyomile, ngakho-ke qiniseka ukuthi inhlabathi ihlala imanzi ngokulinganayo. Amasentimitha amabili wesembozo esizungeze isisekelo sezitshalo zakho kuzosiza futhi ukugcina umswakama uthanda izitshalo.
Uma ufaka i-intshi noma ezimbili zomquba ezizungeze izitshalo zakho zonyaka ze-phlox kanye ngonyaka, maningi amathuba okuthi awudingi ukuwafaka umquba. Kodwa-ke, uma uwafaka umanyolo, qaphela. Initrogen eningi kakhulu ingadala ukuthi lezi zitshalo zikhiqize amaqabunga amaningi nokukhula kwesiqu samafutha esikhundleni sezimbali ezinhle ezimhlophe, ezibubende, eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezipinki nezibomvu esifuna ukuzibona!
Izinketho zomanyolo we-phlox yakho kufanele kube izinketho ze-granular ezikhishwa kancane, okungcono kakhulu okusabalalisa ukukhishwa kwezakhamzimba esikhathini esiyizinyanga eziyi-4-5. Ukusakaza inketho eyimbudumbudu elinganisiwe ezungeze izitshalo zakho njengoba zifaka ukukhula okusha kwentwasahlobo kuphelele.
Ezinye zezinhlobo ezinde kakhulu ze-phlox, njenge-Phlox paniculata, nazo ziyakwazisa ukugqoka uhlangothi lwesibili kukamanyolo oketshezi phakathi nezinyanga zasehlobo ukugcina umbala uveza umbala ezinyangeni ezishisayo. Kodwa-ke, ukubheja okuhle kakhulu ukuqinisekisa ukuthi inhlabathi yakho icebile futhi ivundile ngaphambi kokutshala bese ufaka umquba noma isikhunta seqabunga minyaka yonke, futhi isitshalo sizosithatha lapho.
Kubalulekile futhi ukukhumbula ukuthi yini enye ezungeze izitshalo zakho. Ukutshala ezinwabuzelayo phlox ngaphansi kwezihlahla noma izihlahlana ezinkulu noma izihlahla kungumqondo omubi, ngoba kubeka i-phlox yakho emncintiswaneni osheshayo wezakhamzimba zenhlabathi. Uma uthatha isinqumo sokutshala eduze kwezitshalo ezinkulu noma izihlahla, ungadinga umanyolo owengeziwe ukuze ugcine i-phlox yakho iphilile.
Ngenkathi ungakwazi ukusabalalisa izinhlobo eziningi kusuka enzalweni, i-phlox kulula ukusabalalisa kusuka ekusikeni. Ukusika ngamasentimitha ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili kuzothatha izimpande kalula kakhulu emanzini, ukuxuba ukuxuba, noma i-perlite.
Uma une-cultivar ethile ozama ukuyigcina, ukusika nakanjani kuyindlela engcono yokuhamba, ngoba imbewu ngeke ihlale ikhiqiza amakhophi eqiniso esitshalo sabazali. Eqinisweni, kubalulekile ukuthi unqume ikhanda izimbali ezibunayo ngaphambi kokuba zikhulule imbewu, ngoba i-phlox izokwazi ukuzimela imbewu futhi izitshalo ezivelayo kungenzeka zingabi yilokho okulindele!
Ezinye izinhlobo, njengePhlox stolonifera, nazo zizosakazeka zisuka kubagijimi noma ezitolini ezingaphansi kwenhlabathi. Lezi zinhlobo zingasakazeka ngokushesha okukhulu. Bheka le mibhede futhi ulungele ukunciphisa abagijimi abazama ukuphuma endaweni yabo ehleliwe.
Ungasabalalisa futhi i-phlox kusuka ekuhlukaniseni. Njalo eminyakeni embalwa, susa ngokucophelela izitshalo zakho entwasahlobo bese uzisika zibe iziqeshana ezincane ngommese obukhali, oyinyumba noma nge-shears. Phinda ufake ingxenye yawo, bese unweba umbhede wakho we-phlox noma ubeke ezinye izingxenye ezimbizeni ukuze unikeze abangane noma umndeni. Lokhu futhi kukunika amandla okuchibiyela inhlabathi yakho ngasikhathi sinye, usebenze umquba omningi noma umquba osekhulile kuwo ukuze uqiniseke ukuthi uminyene nomsoco.
Izinhlobo ezinde ze-phlox njengePhlox paniculata zizozuza ekunciphiseni ekuqaleni konyaka. Lapho isitshalo sesifinyelele ukuphakama kwamasentimitha ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili, shiya okungenani iziqu ezinesigamu seshumi neziqu eziqine kakhulu, bese unciphisa ezinye zibuyela ezansi kwesitshalo. Uma usuqedile ukunciphisa iziqu, nciphisa phezulu kwesiqu ngasinye esisele ngenhla nje kwehlumela lamaqabunga ukukhuthaza ukukhula kwe-bushier.
Ukubulala phansi izimbali ezisetshenzisiwe ze-phlox kubalulekile ukuvimbela ukubuyiselwa kwesitshalo ngengozi. Uma uhlala ususa izimbali osuzichithile, isitshalo sizophinde sikhuthazwe ukuthi siqhakaze kakhulu, esigcina umbala uhamba isikhathi eside.
Izinhlobo ezimfushane, ezinwabuzelayo njenge-Phlox subulata ne-Phlox stolonifera kufanele zisikwe emuva uma seziqedile ukuqhakaza. Nciphisa ingxenye yesithathu kuya kwengxenye yokuphakama kwabo uma izimbali sezihlile. Lokhu kukhuthaza iphethini yokuvuthwa kwe-denser esitshalweni kanye nezimbali eziningi esikhathini esizayo sokuqhakaza.
Uma usanda kuhlukanisa i-phlox yakho kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi unomhlabathi ocebile olungele ukutshala kuwo. Izitshalo ezihlukanisiwe kufanele zihlolwe futhi noma yiziphi izimpande ezilimele noma ezingenampilo kufanele zisikwe. Yenza umgodi endaweni otshala kuyo noma ebhodweni bese ngobumnene usakaze izimpande ukuze zibe nendawo enkulu ngaphambi kokumboza ngenhlabathi entsha.
Uma umane ubuyisela isitshalo ebhodweni noma embhedeni omkhulu ukusivumela ukuthi siqhubeke sikhula, sikumbe ngokucophelela usikhiphe esitsheni noma embhedeni waso wangaphambili. Hlola izimpande bese usika noma iziphi ezingenampilo, bese uyitshala njengokungathi isitshalo esihlukene phakathi, uqiniseke ukuthi kunendawo enkulu yokwandisa.
Uma ukwenzile konke lokhu engikushilo ngenhla, kungenzeka ukuthi i-phlox yakho iyachuma. Kodwa kuthiwani uma kungenjalo? Nazi izinto ezimbalwa ongahle ungazicabangi.
Imvamisa, abantu abatshala ikhava yomhlabathi enwabuzelayo banethemba elikhulu kukhaphethi wezimbali ezinhle ezibomvana noma ezinsomi ze-phlox. Kodwa-ke, i-Phlox subulata idinga izimo zelanga ezigcwele ukuze zisebenze kahle, ngakho-ke izindawo ezinesithunzi zingenza ukukhula okucindezelayo, okungagcwele ngokugcwele kanye nokushoda okuhlukile kwezimbali. Uma uzama ukukhuthaza ikhava yaphansi ye-phlox, qiniseka ukuthi unokutholakala kwelanga okuhle. Uma iningi lendawo yakho linomthunzi oyingxenye, cabanga ngePhlox stolonifera, eyenza kangcono ezimeni zomthunzi oyingxenye kune-subulata.
I-browning maphakathi ne-phlox ezinwabuzelayo imvamisa iyinkomba yokuthi izimpande zesitshalo sakho ziyagcwala. Uma isikhungo se-phlox siqala ukubuyela emuva, bamba ngokucophelela isitshalo, usihlukanise sibe izitshalo ezincane eziningi, bese usitshala kabusha ukuze uvumele ukukhula kwezimpande okwengeziwe.
UWilting phlox uvame ukubangelwa amasu okunisela okungafanele. Uma inhlabathi yomile isikhathi eside kakhulu, izitshalo ze-phlox zinzima lapho kwenzeka ukuthutheleka kwamanzi, ngoba azikwazi ukuthatha kalula izakhi zomhlabathi noma amanzi ukuze azigcwalise ngokwazo. Ukugcina umhlaba umanzi ngokulinganayo kuzovikela le nkinga. Qaphela ukuthi ungadluli ngaphezu kwamanzi, ngoba lokho kungalimaza izimpande futhi empeleni kubangele ukuthi isitshalo siqale ukuminza futhi sivele emanzini amaningi!
Izibungu zesicabucabu kuyisinambuzane esivamile kuzo zombili izinhlobo ezinwabuzelayo ze-phlox kanye nezinhlobonhlobo eziphakeme ze-phlox. Ukuvimbela izibungu zesicabucabu ku-phlox, ukufuthwa okuphelele kwe- thatha uwoyela kuzo zonke izindawo zezitshalo kuzowakhipha. Lokhu futhi kusebenza kahle ngokumelene izintwala , okungezinye izinambuzane ezivame kakhulu ku-phlox.
I- phlox isitshalo bug, I-Lopidea davisi, isinambuzane esikhethekile kakhulu. Ukondla ngokuyinhloko ngomswakama we-phlox, kungadala ukubonwa nokugxila emaqabungeni, kamuva kukhule kube nsundu nokufa kwesitshalo. Kuyalulekwa ukuthi uzame ukuvimbela ukubonakala kwesiphazamisi ngokusebenzisa insipho yokubulala izinambuzane efana Insipho Ephephile nangokuhlanza udoti wezitshalo noma iziqu ezifile. Uma ngabe umbhede wakho usuvele ungenwe, lesi silokazane esibomvu nesimnyama singabulawa ngokusebenzisa isifutho se-pyrethrin njenge I-Safeer Brand Yard & Spray Yengadi .
S izipikili nama-slugs ingaphinda ikhosele ngaphakathi nakuzungeze i-phlox yakho. Ngenkathi lokhu kudala umonakalo omncane ku-phlox uqobo ngaphandle kwamaqabunga ambalwa we-nibbled, angadala umonakalo kwezinye izitshalo engadini yakho. Fafaza amanye I-Garden Safe Slug ne-Snail Bait ukuzungeza nangesiqephu sakho se-phlox ukunqanda lezi zinambuzane ezivamile.
Esinye sezifo ezivame kakhulu ukushaya i-phlox sithi isikhutha esiyimpuphu . Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezindaweni ezinezimo ezishisayo nezinomswakama zasehlobo. Ungakulawula lokhu ngokusebenzisa i- thatha uwoyela kuzo zonke izindawo zezitshalo. Ukutshala ama-cultivars amelana nesikhunta nakho kuyindlela, njengoba kunezinombolo zazo ezitholakalayo manje.
Indawo yeqabunga le-fungal futhi kungaba yinkinga. Ngokujabulisayo, nalokhu kungaphathwa ngokusetshenziswa okujwayelekile kwe- thatha uwoyela . Uma ubona izimpawu zamabala eqabunga, faka kanye ngesonto kuze kufike ukubonwa kwamabala, bese ufaka njalo ngenyanga ukuvikela okunye ukuqubuka.
Amanye ama-phlox athinteka ku- ukugqwala . Ukuvimbela ukugqwala kungasakazeki, sebenzisa isifutho se-fungicidal like UBonide Fung-Onil ukuyisula. Lesi sifutho sisebenza kahle ezimeni eziphikelelayo zamabala eqabunga.
Ekugcineni, iminyaka engapheli efana ne-phlox isengozini ye- impande, umqhele, noma ukubola kwesiqu nezindaba. Lezi zivame ukukhula ngenxa yamagciwane asenhlabathini akhula lapho inhlabathi imanzi ngokweqile. Ukuvimbela lokhu, qiniseka ukuthi inhlabathi yakho inomswakama, kodwa idonsa kahle, nokuthi noma imuphi udoti wezitshalo uhlanzwa kude nezitshalo zakho. Izitshalo ezakha izinkinga zokubola kufanele zisuswe futhi zibhujiswe ukuvimbela noma yikuphi ukusabalala kwamagciwane.
IMP: Uma ufuna ukuvimbela ukuzimela ngokwakho, nakanjani. Kungumqondo omuhle futhi noma ngabe awunankinga yokuphinda uthengise, ngoba ukubulala ikhanda kukhuthaza ukukhula kwezimbali okwengeziwe. Isitshalo esivamise ukuqhakaza kuze kube phakathi nehlobo singakwazi ukuqhubeka nokuqhakaza kahle ekwindla uma sinekhanda njalo.
A: Ingabe uhlala endaweni lapho izinyamazane zivame khona? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi bayicala. Izinyamazane zithola iziqu nezimbali ezintsha ze-phlox ukuba kube isidlo esihlwabusayo, futhi zingalimaza ngokushesha izitshalo zakho. Ngenkathi kungaba nzima ukwenza ubufakazi bensimu engadini, ukusebenzisa uhlobo oluthile lwephunga lezilwane zemvelo ukunqanda inyamazane ukuthi ingangeni egcekeni lakho kungaba ngumqondo omuhle.
Ukuhlelela i-phlox ethile yemibhede yakho yezimbali zasentwasahlobo nehlobo? Yiziphi izinhlobo ofuna ukuzikhulisa? Ingabe unayo intandokazi? Ngitshele kumazwana abekiwe!
imikhiqizo eyenza izinwele zakho zikhule ngokushesha
iyiphi i-shampoo engcono kakhulu eyomile
indlela yokukhulisa izinwele zakho emuva ngokushesha